Jaljala Online – Page 33 – Jaljala Online
किन दुख्छ टाउको, औषधि के खाने ? जान्नुहोस
टाउको दुखाइको महसुस गर्नु भएको छ भने यो अत्यन्त नै पीडादाइ हुन्छ । टाउको दुखाइ अत्यन्त पीडादायी र टन्किने खालको हुन्छ । यो टाउकोको कुनै एक भाग वा पुरै टाउकोको भाग दुख्न सक्छ । टाउको दुख्नु आफैमा रोग होइन । यो कुनै पनि रोगको लक्षण हो । टाउको विभिन्न कारणले दुख्छ । घाममा हिँड्दा वा […]
Posted on August 3, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
बाइकको क्लच प्लेट जोगाउन गियरमा रोकेर एक्सिलेटर नबटार्नुहोस्
यातायातका साधनमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको साधन मोटरसाइल हो । यातायातको सेवा पुगेका र सडक सञ्जालले घेरिएका ठाउँका लागि बाइक सामान्य जस्तै पनि भएको छ । हिमाल, पहाड तथा तराई सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ । यसरी सबैले प्रयोग गर्ने बाइकमा आउने समस्याका बारेमा जानकारी राख्न […]
घाँटीभन्दा तल त राम्री छे
अजवी पौड्याल । आर्जन पाण्डेले गाएको ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ बोलको गीतले निकै चर्चा पाएको छ । यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ । गीत निकै राम्रो भएर भन्दापनि गीतमा प्रयोग भएका शब्दका कारण चर्चित बनेको हो । एक हप्ताअघि युट्युबमा अपलोड भएको यो गीत अहिले ट्रेन्डिङमा छ । तर गीतमा प्रयोग […]
Posted on August 2, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
दाङमा १७ दिनकी ‘अञ्जली’का बुवाको खोजीमा प्रहरी, यस्तो छ भित्री कारण (नालीबेलीसहित)
साउन १६, दाङ । राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा एउटा छाप्रो छ। बाँसका भाटाले च्यापेको र माटोले लिपेको खरको छानो भएको घरभित्रबाट बाहिरको दृश्य देख्न सकिन्छ। यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटी अनलाइनमा लेखेका छन् । दुइटा कोठा छन्। सुत्ने, भात पकाउने एउटै। दुइटा खाट। चकटी बिछ्याइएको छ। शिशु काखमा राखेर उनी धुमधुमती बसिरहेकी थिइन्। […]
Posted on August 1, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
आउँदो ३ दिन वर्षात र बाढीको सम्भावना कति छ ? यस्तो छ पूर्वानुमान [सुचीसहित]
साउन १६, काठमाडौं । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आउँदो तीन दिन नदीहरूमा पानीको बहाब बढ्न सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार बिहान ७ बजे प्रकाशित बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनमा महाशाखाले मुख्य र मझौला नदीमा बहाव बढ्दो क्रममा हुने तर सतर्कता तहभन्दा तलै हुने पूर्वानान गरेको छ। संखुवासभा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, लमजुङ, […]
यी व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् दहि, यस्तो छ कारण
यस्तो अवस्था भएका व्यक्तिले भुलेर पनि खानुहुँदैन दही नत्र भने विष समान बन्न सक्छ। तर यसमा अन्य फाइदाहरु पनि हामीले यहाँ व्याख्या गरेका छौँ। जानौँ : दही स्वादिलो पेय हो र गुणकारी पनि। दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ। गर्मीमा दहीले तिर्खा पनि मेट्छ। तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ। दही […]
Posted on July 31, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
नायिका स्वस्तिमा खड्काले दिईन यस्तो अन्तर्वार्ता [भिडियोसहित]
यो अन्तरबार्ता नेपाललाइभका लागि अनिल यादवले लिएका छन् । बजारमा एकपछि अर्को कलाकारले आफ्नो पारिश्रमिक रु २० लाखदेखि ५० लाखसम्म दाबी गरिरहेका बेला केही दिनअघि अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले ‘हजार जुनीसम्म’ फिल्मको ट्रेलर लन्च कार्यक्रममा भनिन्, ‘मैले २० लाखको पारिश्रमिक लिन्छु भनेचाहिँ ५० लाखको अडियन्स तान्न सक्नुपर्छ। मैले २० लाख लिँदा प्रोड्युसरको हातमा ५ लाख पनि […]
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसामु यस्ता छन् ५ चुनौती
साउन १५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै नेकपाका नेता योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। यो खबर उत्तम काप्रीले नेपाललाइभमा लेखेका छन् । गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निधन भएको ५ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ पर्यटनमन्त्री नियुक्ति गरेको हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी […]
बाबु-आमाको झगडाले ६ वर्षीया छोरी घाइते [नालीबेली]
साउन १४, विराटनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमा मंगलबार दिउँसो ठूलै जमघट थियो। कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेलमा एक दम्पत्तीको झगडाबारे छलफल भइरहेको थियो। यो खबर किशोर बुढाथोकीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । विराटनगर महानगरपालिका-६ ब्रह्मपुराका किसन कामत र पत्नी सुशीला मण्डलबीचको खटपटमाथि छलफल चल्दै थियो। साउन २ गते पतिले कुटपिट […]
Posted on July 30, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
Previous 1 … 32 33 34 … 61 Next